A Literature On Alcoholism Submitted By A Fan Of NAJ Entertainment | NAJ Entertainment
A Literature On Alcoholism Submitted By A Fan Of NAJ Entertainment
This isaliterature submitted byafan of NAJ Entertainment,agirl of 26. Please read the Article and give your feedback in the comment section below.
Statutory Warning: Smoking and Alcohol consumption is injurious to health.
रक्सिको मात मेरो लागि positive !!!
छोडेकी थिई मलाई त्यो पनि ठूलो कारण बिना नै । त्यस्को कति ठूलो नौटंकी के । ओहो । साह्रै नै attitute बोकेका हुद रैछन् । त्यही रात हो मैले एउटा ठूलो rum को बोत्तल किने black । टन्न पिए । भलै शरीरको लागि हानिकारक होला तर मेरो लागि अमृत बन्न पुग्यो । कति नराम्रो सोचाई रहेछ त्यो प्रती म मा, कति तिक्तता बोकेकी रहिछे । मलाई सुनाउन मन लाग्यो ।
सितनसंग एक घुट्की लाए । कस्तो नमिठो गन्ध । सायद त्यो गन्ध मेरो धोकेबाजको श्वास थियो होला । अनि कति नमिठो स्वाद । म कल्पना सम्म गर्न सक्दिन । अनि हरेक घुट्की पिच्छे मेरो टाउको घुमाउन थाल्यो । रोटेपिङ भन्दा बढी घुमेको थियो होला मेरो दिमाग । त्यो पक्कै त्यही केटीको खेलाई हुनुपर्छ मेरो जीवनमा ।
थाहा छ मैले कसरी हटाए त्यस्को तिक्तता?? थाहा छ त्यो मेरो लागि कति गिरेकी थिई ?? सायद तपाईहरु पनि अचम्मित पर्नु हुन्छ होला ।
अमिलो डकार आयो । छ्या , कति अमिलिएकी रहिछे त्यो , अझ भित्रै देखि । मन भरी मेरो अमिलो पन खेलाएर होला नि आफै अमिलिएकी । केहिबेर पछि त म धान्ने सकिन । सायद त्यो केटी मैले गुमाएर होला जस्लाई मैले जीवनको टेको सम्झिएको थिए । बिस्तारै ढले अनि मेरो टाउको ठोक्कियो आडैको भित्तामा तर अह मलाई दुखेको थिएन किनकी मेरो दिमाग त्यही केटी थिए सायद चोट त्यसैलाई पर्यो होला । एकछिन पछि मलाई नै दुख्न सुरु गर्यो सायद ऊनि मेरो दिमागबाट हटेर गई सकी होहोली
फेरि अमिलो आयो । थोरै थोरै गर्दा गर्दै अलिक बढी नै भएछ क्यारे । कति नमीठो । छ्या , मेरो बारेमा कति नराम्रो सोच्दी रहिछे त्यस्ले मलाई । सायद आज म जे भोग्दै छु त्यही निष्ठुरीको म प्रतिको व्यवहार भोग्दै छु । ती स्वाद त्यही निर्मोही को सोचाई नै होला मप्रतिका ।
मेरो मुखबाट खाना जान मानेन । सायद त्यस्ले मलाई भोकै मरे हुन्थ्यो होला भनेर सरापेकी थिई होला । अनि सुते । घरि kitchen rack मुनि पुगे त घरी खाटमुनी । सायद यस्लाई निन्द्रा नलागोस भनेर बचन राखेकी थिइ होला । त्यही भएर नै होला मैले केही गरेपनि आफूलाई काबुमा राख्न सकेको थिइन ।
अर्कोदिन बिहानै उठेको थिए । अह मलाई सन्चो भएकै छैन । न त बस्न सकेको छु न त उठेर केही गर्न नै । मातले अझै छोडेको थिएन । भोक लागेको थियो । हिजोको तरकारी तताए खाए । स्वाद पाइन । चिनी खाए । त्यस्को पनि गुलियो पन भेटिन । निकै पछुताए । सायद पछुताउनुमा पनि उसैको सराप मिसिएको थियो होला । साथीहरु उठे । तर तिनीहरु पूरा सकुसल नै थिए । तर मलाई भने अमिलो डकार आउला आउला जस्तो गरेको थियो तर आइसकेको भने थिएन ।
खाना बनाए । खान मन पनि थिएन । हिजोको कुरा बाहिर निस्किए हुन्थ्यो जस्तो भयो मलाई । अनि restroom गए । अमिलो डकार अनि हिजोको तरल । एकै चोटि आयो तर अहिले अलिक ठिए भएजस्तो महसुस गरे । अनि भात खाए । तर अफसोच , निल्ने बेला घाँटी मज्जाले पोल्यो । पानीको सहायताले जसो तसो खाए । अनि कोठामा गए । दिनभर ह्याङ्ग मै झुले ।
अर्कोदिन म सकुसल भए । म प्रती जति तिक्तता बोकेकी थिए भन्ने मैले थाहा पाए र उस्को त्यो तिक्तता बगाईदिए । अहिले कुनै माया छैन अनि उ प्रती कुनै चासो छैन । चोखो माया दिएको थिए तर तेरो सोचाईमा म तितो रहेछु । केही भएन, प्रगती गरेस । भगवानले तलाई खुसी बनाई राखुन शुभकामना !!!!
Previous articleAlleged Dawood Ibrahim aide in Nepal isamayoral candidate in town near Indian border
Next article४५ करोड भन्दा बढी मुल्यको ८८ किलो सुन काठमाडौ बाट समातियो